Hutano uye Kugwinya Franchise Yekutengesa | Mukana weFrancise | Franchiseek
Hutano uye Kusimba Franchise
Franchiseek»Mukana weFrancise»United Kingdom»Hutano uye Kusimba Franchise
Inoratidzwa Hutano uye Kusimba Franchises
Hutano Hutano uye Kugwinya Franchises
Hutano & Fitness Franchise
Iyi indasitiri yekusimba iri kuwedzera pasi rese nekuwedzera kwehuwandu hwekufutisa huri kukura pasi rese vanhu vari kurwisa izvi nekuwana nhengo yemitambo uye kushanda kunze kwenyika. Iyo indasitiri yemitambo yepasi rese yakaona kukura kwakakura kudaro mukati memakore mashoma apfuura. Saka nhasi isu tonyora zvimwe chokwadi chakatenderedza indasitiri yekusimbisa mitezo munyika dzakasiyana kuti iwe ugone kunyatsonzwa kuti yakakura sei iyo indasitiri iyi inogona kuwona kukura mune ramangwana.
Statistics kutenderedza Health & Fitness indasitiri.
Zvino ini ndichatanga huwandu hwakati wandei hwakambounganidzwa mune dzakawanda nyika kuratidza mhando yekukura uye chinodikanwa chiripo chekuti bhizinesi rezvehutano & hwekugwinya munzvimbo dzakawanda pasi rese. Huwandu uhu hunogona kukurudzirawo vamwe vanhu kutenderera nekugadzira mari mune ino indasitiri inonakidza iyo iri kuratidza kukurumidza kukurira kwezvinodiwa uye vatengi pasi gore rega rega.
Iyi indasitiri yemitambo muUS yakakosha madhora mazana matatu emadhora emadhora ekuAmerica.
Iyo indasitiri yemitambo muUS yakaona kukura kukuru kwe4% mumakore gumi apfuura.
Makumi maviri muzana evakuru vekuAmerica vane nhengo yekurovedza muviri kana yehutano hwevashandi vekirabhu.
Ukuru hwemusika hwekusimudzira indasitiri muEurope yese hwakasvika zvakasimukira € 24 Bhirioni emauro muna 2019.
Nyika muEurope yakabatsira zvakanyanya kukura kwemusika muna 2019 yaive Germany.
Iyo indasitiri yemitambo muGerman yakaita mari inosvika € 5.3 Bhiriyoni ma euro.
Maiziva here kuti vanhu zviuru mazana matatu kuUK vanojoinha jitimu pagore?
Nhengo dzeGym dzakakwira nemamiriyoni matatu kuUK pakati pe3 kusvika 2010.
Kubva 2010 kusvika 2020 indasitiri yemitambo yemhanzi yakakura ne33%.
Iyo indasitiri yemitambo inopa mari inosvika mabhiriyoni mashanu kuUK gore rega.
Aya manhamba anoratidzei indasitiri yeHutano neFitness?
Muhuwandu hwenhamba idzi dzinoratidza iro indasitiri yakakura iyo indasitiri yekusimba iri uye kwete munyika imwechete inoenda kune dzimwe nyika. Zvakare iyo indasitiri yehutano & yemhando yepamusoro iri kuona kukura kwese makore gumi. Izvo zvinoratidza kuti indasitiri yehutano & hwekusimba yatova yakakura asi ichiri pane yakakwira kumusoro kutenderera. Saka kana iwe wanga usina chokwadi kutenderedza mari uye uchimhanyisa akasimba franchise tine tariro idzi nhamba dzakawedzera kukurudziro kwako uye dzakaratidza zvechokwadi denga ndiwo muganho mune yekusimba indasitiri.
Mhedziso yakatenderedza Ihwo hweHutano & Fitness Viwanda.
Mukupedzisa iyo indasitiri yehutano & kusimba iri kuratidza kuwedzera kwakasimba mukukura gore rega rega. Izvo zvinoratidza hutano & kusimba bhizinesi modhi imhando yebhizinesi yakagadzikana yekutevedzera. Zvakare kudiwa kuri kuramba kuchikwira gore roga roga uye dzimwe nyanzvi mune yehutano & yekusimba muviri vakatokurudzira kuti ivo vanotarisira kuti huwandu uhu huvirire mukati memakore gumi anotevera. Sezvo kudiwa kuchawedzera zvakanyanya uye kufutisa uye huwandu hwehutete hwevacheche huchawedzerwa. Zvakawanda tinovimba iwe wakadzidza chinhu chakakomberedza hutano hwepasi rose & indasitiri yekusimba nekuverenga izvi nhasi uye tinokushuvira zvakanakisa rombo rakanaka nebasa rako remangwana mukati mechikamu chefrancising kubva kune isu tese kuFranchiseek.